Bluetooth Files Share 7.7.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.7.6 လြန္ခဲ့ေသာ7လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Bluetooth Files Share
Bluetooth Files Share ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Use Bluetooth File Share application to Share Photos, Videos, Music, Documents, Apps with your Friends and Family over Bluetooth. A Very Decent UI and High Performance Application Which makes Sharing content very easy. File Explorer is also include so that you can manage files and folders stored in your device.Enjoy.
Share Files and folders stored on Clouds Storage via Bluetooth.
1) High Performance
2) Switch On Bluetooth from application
3) Admin Bluetooth Connections
4) Filters Photos, Videos, Music, Documents, Zip Files and Apps.
5) Share via Bluetooth
6) Share via Social Media Applications e.g Gmail, Facebook etc
7) Back up Application and Share Apk via Bluetooth
8) Support Google Drive, Dropbox.
9) Share Contacts
10) In Built Image Browser
အသုံးပြုခြင်းသင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် Bluetooth ကျော်မိသားစုနှင့်အတူဓါတ်ပုံများ, Videos, Music, Documents, Apps ကပ Share Bluetooth ကို file sharing လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာ။ မျှဝေခြင်း content ကိုအလွန်လွယ်ကူစေသည်ဘယ်အလွန်လျောက်ပတ်စွာ UI နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Application ကို။ File သင်သည်သင်၏ device.Enjoy ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖိုင်နဲ့ဖိုင်တွဲစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင် Explorer ကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
Bluetooth မှတဆင့် cloud storage မှာသိမ်းထားတဲ့ဝေမျှမယ်ဖိုင်နဲ့ဖိုင်တွဲ။
လျှောက်လွှာကနေ Bluetooth ကိုတွင် 2) Switch-
3) Admin & Bluetooth ကို Connections အ
4) ဓါတ်ပုံများ, Videos, Music, Documents, ZIP ဖိုင်နဲ့ Apps ကိုစီစစ်။
Bluetooth မှတဆင့် 5) ဖြန့်ဝေ
လူမှုမီဒီယာ Applications ကိုဥပမာ, Gmail, Facebook ကနေတဆင့်စသည်တို့ကို 6) ဖြန့်ဝေ
7) နောက်သို့ Bluetooth မှတဆင့် Application နှင့်ဖြန့်ဝေ Apk တက်
8) Google Drive ကို, Dropbox ကို support လုပ်နိုင်ပါတယ်။
10) Built Image ကို Browser ကိုခုနှစ်တွင်
Bluetooth Files Share အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Bluetooth Files Share အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Bluetooth Files Share အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Bluetooth Files Share အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.61k 16.19M
Bluetooth Files Share ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Bluetooth Files Share အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.7.6
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://sites.google.com/site/bluetoothfileshare/privacy
App Name: Bluetooth Files Share
Release date: 2018-12-10 15:36:11
လက်မှတ် SHA1: 5C:E3:E5:0B:3E:97:00:76:0F:FB:AE:03:59:7E:A9:23:B5:8D:44:64
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Avdhesh Yadav
အဖွဲ့အစည်း (O): Avdhesh Yadav
နယ်မြေ (L): New Delhi
နိုင်ငံ (C): IN
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): New Delhi
Bluetooth Files Share APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ